Ogaden News Agency (ONA) – Save The Children oo Kadayrisay Xaalada Wadanka Itoobiya.
Save The Children oo Kadayrisay Xaalada Wadanka Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ June 25, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in malaayiin dad ah oo kusugan daafaha wadanka ay qarka usaaran yihiin in ay macaluul udhintaan kuwaas oo qaylo dhaanta kasoo yeedhaysana ay socotay bilihii lasoo dhaafay.
Warbixin ay soosaartay hay’ada caalamiga ah ee Save The Children ayaa lagu sheegay in malaayiin dad ah oo ubadan ciyaal oo kusugan guud ahaan wadanka gumaysiga Itoobiya ay qarka usaaran yihiin macaluul ba’an oo ay katageen abaarihii wadanka kajiray.
Maareeyaha guud ee hay’ada Save The Childaren Mr Jhon ayaa sheegay in ay dhowr jeer oo hore caalamka baaq udireen si ay ucaawiyaan ciyaalka iyo dadka tabaalaysan ee kusugan Itoobiya, hase yeeshee ilaa iyo hada ma aragno wax qabad muuqda ayuu yidhi Mr Jhon.
Dadka lasocda arimaha Itoobiya ayaa sheegaya in deeqaha lasiiyo wadanka Itoobiya ay simuuqata ugu tagri falaan shakhsiyaadka ugu sareeya awooda wadanka iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka gumaysiga oo aan mudo milo ah qaadanin wax mashaaraad ah.
Hay’adaha iyo wadamada deeqaha bixiya ayaa lasheegayaa in ay ka caajiseen wax siinta wadanka Itoobiya waxayna garwaaqsadeen in aan lagaadhsiin doonin dadkii mudnaa, waana sababta keentay in ay hay’aduhu ka cagajiidaan kaalmaynta Itoobiya.
Hay’ada Save The Children ayaa warbixinteeda kuxustay in wadanka Ogadenia uu yahay midka ugu daran ee macaluushu ay kajirto, wuxuuna sheegay in canfarta iyo Oromaduna ay laqabaan.
Mr Jhon oo madax ka ah Hay’ada Save The Childaren qaybteeda Itoobiya ayaa sheegay in abaaruhu ay ku habsadeen Ogadenia iyo qaybo badan oo Itoobiya ah labo sano kahor hase yeesheen aan waxba laga qabanin, waana arinta keentay in ay xaaladu macaluul isu badasho ayuu yidhi Jhon.
Sikastaba ha ahaatee taliska wayaanaha ayaan isugu dhag jalaq usiinin eedaymaha iyo talooyinka loosoo jeediyo wuxuuna siwayn ugu farxaa baaba’a kajira dhulka uu gumaysto.